कलियुगका कुरा: शिक्षकले तलब पाएनन्
"बुबा नमस्कार !"
"नमस्कार बाबुलाई चिनिन नि -"
"म खहरेबाट आएको"
"ए बाबु नातिनीको तलब आयो -"
२०६५ साल जेठ ४ गते विहान, शिक्षकले तलब पाए नपाएको बारेमा बुझ्न तलाड स्थित शिक्षिका भोज माया खाणको घरमा जाँदा उहाँको हजुर बुबाले यो संवाददातासँग माथिको संवाद गर्नुभएको हो ।
डेढगाउ उच्च मा.विले गत वर्षकक्षा ६ र ७ मा सेक्सन छुट्टयाएर बाल कल्याण प्रा.वि. खर्सानटामा पनि पढाउने व्यवस्था मिलाए पछि तीन जना शिक्षक भोजमाया खाण, खीम बहादुर भुजेल र माया भण्डारीलाई करारमा नियुक्ती गरेको थियो ।
गत वर्षबैशाख देखि तीनै जना शिक्षकले पढाउन थाले पनि उनीहरुले साउन महिना सम्मको मात्र तलब पाए । भदौबाट चैत्र सम्मको तलब भने २०६५ वैशाख अन्तिम सम्म पनि नपाएको गुनासो शिक्षकहरुले गरेका छन् ।
डेढगाउँ उच्च मावीका प्राचार्य रामबहादुर श्रेष्ठसँग यस विषयमा जिज्ञासा राख्दा उहाँले शिक्षकहरु विद्यालयले भर्ति गरे पनि तलब खुवाउने जिम्मा गाविसको भएको बताउनुभयो ।
गाविसका पदाधिकारीले भने सोझै शिक्षकलाई तलब दिन नमिल्ने बताए । उन्का अनुसार बाटो खन्नका लागि दिइएको रकमबाट शिक्षकलाई तलब दिने सम्झौता भए पनि बाटो नखनिएकाले अहिलेसम्म रकम दिन नसकिएको हो ।
गा.वि.स. र विद्यालय र स्थानीय बासीन्दा बीचको समन्वय अभाव हुँदा आफूहरु मर्कामा परेको शिक्षक भुजेलले गुनासो गरे । विद्यालयको नामबाट नियुक्ति पत्र दिइएकाले तलब उपलब्ध गराउन पनि विद्यालयले पहल गर्नुपर्नेमा भुजेलले जोड दिए ।
उता, यस वर्षडेढगाउँ उच्च मावीमा कक्षा ६ र ७ बाट सेक्सन हटाइए पछि एउटै कक्षा कोठामा एक सय एक जना विद्यार्थी सम्म राखेर पढाउनु पर्ने वाध्यता भएको शिक्षक चिनिलाल राजभरले बताउनुभयो ।